Pressure piles over diaspora vote – Zimbabwe Daily
HARARE – Chief Nhlanhlayamangwe Ndiweni recently said the 2023 elections outcome would be ruled illegitimate by the international community if the more than five million Zimbabweans in the diaspora are not allowed to vote. Ndiweni’s remarks came weeks after underfire Speaker of the National Assembly Jacob Mudenda called for the amendment to the electoral laws to allow for diaspora vote, prompting the ruling Zanu PF to hound the veteran politician.
Speaker of the National Assembly Jacob MudendaZanu PF spokesperson Christopher Mutsvangwa last week said the Speaker had crossed the line. Christopher MutsvangwaGovernment is under pressure from civic groups and opposition parties to allow diasporans to vote in next year’s polls.
HARARE - Chief Nhlanhlayamangwe Ndiweni recently said the 2023 elections outcome would be ruled illegitimate by the international community if the more than five million Zimbabweans in the diaspora are not allowed to vote. Ndiweni’s remarks came weeks af...